No Secrets (2019) - Myanmar Asian TV
No Secret (Chinese Drama)
ဒီဇာတျလမျးတှဲလေးကတော့ Korea series တဈခုကိုအခွေံပီးရိုကျကူးထားပါတယျ
(ယူတို့ရဲ့အခဈြတျော Lee Jong Suk ရဲ့ I Can Hear Your Voice ဒီဇာတျလမျးတှဲကိုအခွခေံထားတာပါနျော)
Main role actor ကတော့ (Our Gamorous Tmes / Royal Nirvana/ Princess agents )
ဒီဇာတျလမျးတှဲတှထေဲမှာ main role အနနေဲ့ရောဇာတျရနျအနနေဲ့ရောပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ Actor Kim Han လေးပါ❤️
no secret မှာတော့သူက တက်ကသိုလျကြောငျးသားလေးတဈယောကျပါ ငယျငယျတုနျးကဖခငျဖွဈသူနဲ့ car accident ဖွဈရာမှ မငျးသမီးကွောငျ့အသကျရှငျကနျြရဈပီး accident အပီးမှာသူဟာ တခွားသူရဲ့အတှေးတှကေိုဖတျနိုငျတဲ့ စှမျးရညျပိုငျဆိုငျလာပီး သူကွီးပွငျးလာတဲ့တဈလြှောကျမငျးသမီးကိုရှာဖှနေပေီးဆယျနှဈအကွာပွနျတှတေဲ့အခါ သူ့စိတျအထငျပုံစံနဲ့ လကျရှိမငျးသမီးပုံစံထပျတူကနြပေါ့မလား ???
Main role Actress ကတော့ Qi Wei လေးပါ
(admin ကသူ့ကားလေးတှတေော့မကွညျ့ဖူးတော့သူ့ဇာတျလမျးလေးတှမေညှနျးတော့ဘူးနျော)သူလေးကတော့ဒီကားထဲမှာ ငယျဘဝအကွောငျးရာတှကွေောငျ့ရှနေ့မေလေးတဈယောကျဖွဈလာပီးတော့ ရှနေ့လေောကမှာနာမညျကွီးဖို့ရာကွိုးစားနပေီး ဆယျနှဈအကွာက ကလေးလေးနဲ့ပွနျတှတေဲ့အခါမှာ သူ့မရဲ့ရှနေ့ဘေဝဘယျလိုပွောငျးလဲသှားမလဲ
သူတို့နှဈယောကျကကံတရားကွောငျ့တှဆေုံ့ခဲ့ပီးဆယျနှဈအကွာမှာလဲသူတို့ကံတရားပွနျဆကျနှယျလာတဲ့အခါမှာ သူတို့နှဈယောကျဘယျလိုတှေ romantic ဆနျကွပီး ဘယျလိုအရှုတျထှေးတှနေဲ့တှကွေုံ့ရမလဲ /အခကျခဲတှကေိုဖွတျကြျောနိုငျကွမလားဆိုတာကိုစောငျ့မြှျောကွညျ့ရှု့ပေးကွပါအုံးနျော
No Secret Rating 7.8 ရရှိထားပါတယျ
ဒီဇာတျလမျးတှဲလေးကို Myanmar asian tv Channel ကနေ တဈပတျနှဈပိုငျးနှုနျးတငျဆကျပေးသှားပါမယျရှငျ့
mmatv ခဈြပရိတျသတျတို့ဒီ page လေးကိုဆကျလကျအားပေးကွပါအုံးနျော?
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ Korea series တစ်ခုကိုအခြေံပီးရိုက်ကူးထားပါတယ်
(ယူတို့ရဲ့အချစ်တော် Lee Jong Suk ရဲ့ I Can Hear Your Voice ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကိုအခြေခံထားတာပါနော်)
Main role actor ကတော့ (Our Gamorous Tmes / Royal Nirvana/ Princess agents )
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ main role အနေနဲ့ရောဇာတ်ရန်အနေနဲ့ရောပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Actor Kim Han လေးပါ❤️
no secret မှာတော့သူက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ပါ ငယ်ငယ်တုန်းကဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ car accident ဖြစ်ရာမှ မင်းသမီးကြောင့်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပီး accident အပီးမှာသူဟာ တခြားသူရဲ့အတွေးတွေကိုဖတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ပိုင်ဆိုင်လာပီး သူကြီးပြင်းလာတဲ့တစ်လျှောက်မင်းသမီးကိုရှာဖွေနေပီးဆယ်နှစ်အကြာပြန်တွေ့တဲ့အခါ သူ့စိတ်အထင်ပုံစံနဲ့ လက်ရှိမင်းသမီးပုံစံထပ်တူကျနေပါ့မလား ???
Main role Actress ကတော့ Qi Wei လေးပါ
(admin ကသူ့ကားလေးတွေတော့မကြည့်ဖူးတော့သူ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေမညွန်းတော့ဘူးနော်)သူလေးကတော့ဒီကားထဲမှာ ငယ်ဘဝအကြောင်းရာတွေကြောင့်ရှေ့နေမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပီးတော့ ရှေ့နေလောကမှာနာမည်ကြီးဖို့ရာကြိုးစားနေပီး ဆယ်နှစ်အကြာက ကလေးလေးနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာ သူ့မရဲ့ရှေ့နေဘဝဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲ
သူတို့နှစ်ယောက်ကကံတရားကြောင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပီးဆယ်နှစ်အကြာမှာလဲသူတို့ကံတရားပြန်ဆက်နွယ်လာတဲ့အခါမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုတွေ romantic ဆန်ကြပီး ဘယ်လိုအရှုတ်ထွေးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရမလဲ /အခက်ခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ကြမလားဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှု့ပေးကြပါအုံးနော်
No Secret Rating 7.8 ရရှိထားပါတယ်
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို Myanmar asian tv Channel ကနေ တစ်ပတ်နှစ်ပိုင်းနှုန်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင့်
mmatv ချစ်ပရိတ်သတ်တို့ဒီ page လေးကိုဆက်လက်အားပေးကြပါအုံးနော်?
Translators : Cheng Ai Zheng & Nyo Mee Htike
Episode 01 Episode 02 Episode 03 Episode 04 Episode 05 Episode 06 Episode 07 Episode 08Episode 09Episode 10 Episode 11 Episode 12 Episode 13 Episode 14 Episode 15 Episode 16 Episode 17Episode 18Episode 19Episode 20Episode 21Episode 22Episode 23Episode 24Episode 25Episode 26Episode 27Episode 28Episode 29Episode 30Episode 31Episode 32 END
Episode 01 Episode 02 Episode 03Episode 04Episode 05Episode 06Episode 08Episode 09Episode 10Episode 11Episode 12Episode 13Episode 16Episode 26Episode 27
Starring: Huang Yilin, Jin Han, Maggie Huang, Qi Wei, Sunny Wang,